Viralheat: Social Media nlekota oru maka SMBs. Martech Zone
Sunday, Jenụwarị 1, 2012 Wednesday, February 10, 2016 Douglas Karr
Anyị anọwo na nche maka ọrụ nlekota oru mgbasa ozi ọha na eze ruo oge ụfọdụ. Usoro nlekota oru nke ndi mmadu na-enye gi ohere idozi udiri na isi okwu ma nyochaa ebe di iche iche di iche iche nke ndi mmadu na-ekwuputa okwu, mmetuta na ihe omume. Maka ụlọ ọrụ, usoro nlekota oru mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịba ezigbo uru maka ijikwa nsogbu ndị ahịa, na-enyocha etu ndị mmadụ si eche banyere akara gị, yana ịlele etu usoro mmekọrịta gị na-arụ.
Na esemokwu bụ nnukwu ego nke usoro ndị a! Ratingmepụta nloghachi na usoro mgbasa ozi na-ewe oge, yabụ na-agwa onye ahịa ya ka ọ gbakwunye ikpo okwu nke bụ puku kwuru puku dollar kwa ọnwa. Ajụrụ m ụfọdụ ndị na-ere ahịa mgbasa ozi mgbasa ozi, "Enwere usoro nlekota mgbasa ozi mmekọrịta dị ọnụ ala n'ebe ahụ?" ma enwetaghị ọtụtụ azịza.
Otú ọ dị, otu nzaghachi si Carri Bugbee emeela m nnukwu obi ụtọ. Ngwurugwu na-egosi ka a siri ike na-elekọta mmadụ media nlekota na nchịkọta ikpo okwu wuru maka ahia ahia obere na ọkara (SMB).
Obi dị m ụtọ ịmalite iji Ngwurugwu ịmalite nyochaa nlebara anya mgbasa ozi nke ndị ahịa anyị. Usoro ahụ gosipụtara na ọ siri ike na ọtụtụ atụmatụ edepụtara:
Real oge nlekota - nke a bụ ihe dị mkpa. Ọtụtụ n'ime sistemụ ndị ọzọ abụghị ezigbo oge, naanị na-achịkọta data sitere na sistemụ ndị ọzọ.
Nchịkọta mmetụta iji chọpụta ndị na-eso ụzọ nwere mmetụta dị ukwuu nke nwere ike imetụta mkpọsa.
Nyocha mmetụta iji chọpụta ọnọdụ nke aha ọ bụla.
Nyocha nje iji mata tweets na kwuru nwere ikike ịrịa.
Nleba vidiyo nke karịrị 200 video saịtị.
CRM mwekota ịkwanye na-eduga na Salesforce ma ọ bụ na-ebudata site na Excel.
Ọnọdụ Geo ikike igbochi profaịlụ gị site na ọnọdụ ọ bụla n'ụwa.
Mgbanwe Dynamic ike ka i wee nweta ntabi ificationsma Ọkwa na kwuru.
API - yabụ ị nwere ike iwekọta data ahụ na sistemụ ọ bụla ịchọrọ.
Wezụga atụmatụ ahụ, akụkụ kachasị adọrọ mmasị nke Ngwurugwu nwere ike ịbụ ịnye ọnụahịa. Ngwunye mmeghe ha bụ $ 9.99 kwa ọnwa yana atụmatụ ndị bụ isi. Ihe ngwugwu $ 29.99 kwa ọnwa na-egosi na ị nwere ihe ọ bụla obere azụmahịa kwesịrị ịmalite. Ihe ngwugwu $ 89.99 kwa ọnwa gụnyere ngwugwu ụlọ ọrụ ahaziri iche!
Maka ọnụahịa, nke a nwere ike ịbụ otu n'ime nchịkọta nlekota nke mgbasa ozi mmekọrịta m siri ike m chọtara. Ọ bụrụ na ị maara karịa usoro mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ maka SMBs n'ebe ahụ (ọ bụghị mbipụta mgbasa ozi ọha na eze), ka anyị mara na nkwupụta. Ma - ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Ngwurugwu, anyị ga-amasị ịnụ echiche gị na usoro. Obi dị anyị ezigbo ụtọ na anyị debanyere aha maka ngwugwu mgbakwunye (ndị ahụ bụ njikọ na post a).
Tags: nlekota onodu geonlekota oru geosocialnchịkọta influencerechiche nyochammekorita nke mmaduelekọta mmadụ mediamgbasa ozi mgbasa ozinchịkọta mmadụ mgbasa ozinlekota oru mgbasa ozinlekota oru vidiyonyocha nyochamalitere ịrịa ọkụ
Dee 10, 2012 na 12: 55 AM
Doug, agbabiri m mgbe m hụrụ post gị n'ihi na achọtara m ya site na nyocha ngwaọrụ nlekota oru mmekọrịta maka SMBs. Ahuru m aha m na post gi. Daalụ maka mkpu-apụ!
Anọ m na nche maka ngwaọrụ nlekota ọhụụ dị oke ọnụ maka mmalite na SMB, mana ọ dị ka Viralheat ka nwere ike ịbụ nhọrọ kacha mma maka ego ahụ. Ọ bụrụ na m hụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ, aga m abanye iji mee ka ị mara.
Dee 10, 2012 na 12: 58 AM
Biko mee, @CarriBugbee: disqus! Anyị achọtabeghị ihe ka mma n'ebe ahụ (ekele dịrị gị!) - Na Viralheat na-aga n'ihu na-emeziwanye ikpo okwu ha.